“Aoka ianareo Eveka ho akaikin’Andriamanitra sy ny mahantra”. Io no hafatry ny Papa
tamin’ireo Evekan’i Madagasikara, teo amin’ny Katedraly Andohalo, ny sabotsy tolakandro teo.
Miompana amin’ny tenin’i Kristy “izay ataonareo amin’ireny madinika ireny dia ataonareo amiko” io hafatry ny Papa io. Izany no anisan’ny nanokanany fotoana nihaonana tamin’ny Mompera Pedro, Pretra teratany Argentine izay iray fiaviana aminy, omaly tolakandro teny amin’ny Akamasoa. Tsiahivina fa tsy misy valaka tamin’ny fiainan’io Momperan’Andralanitra io ny nataon’ny Papa fony izy Pretra sy Arseveka ary Kardinaly tany Argentine. Na efa eveka aza izy tsy nitondra fiara manokana fa nandeha taksibe sy an-tongotra ary mividy sakafo sy miara-mihinana amin’ireo tsy manan-kialofana eny an-dalana. Fony vao voafidy ho Papa izy dia tsy nety nandeha fiara manokana fa niaraka fiara tamin’ireo kardinaly rahalahiny. Nitsitsy izy hanasoavana ny mahantra sy hitsinjovana ny fiangonana maneran-tany. Misy amin’ireo Eveka Malagasy no mahafoy amin’ny asa soa ho an’ny mpino. Ohatra ho an’ny mpitondra fanjakana hatrizay koa izay milaza fa mitsitsy hatrany nefa tsy hita soritra hoe nankaiza ireo vola notsitsiana.